छोटकरीमा : कोरोना खोप अभियान किन सुस्तायो ?
भारतले अनुदानमा उपलब्ध गराएको कोभिशिल्ड खोप अभियान अन्तर्गत पहिलाे चरणकाे खाेप अभियान शनिवार (भाेलि) सकिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएकाे छ । ४ लाखलाई लगाइने भनिएको कोरोना खोप नवौं दिनसम्म आइपुग्दा करिब २ लाखमा पनि किन लगाउन सकिएन ?
शुक्रवार बेलुकीसम्म ७७ जिल्लाका दुई सय एक खाेप बुथबाट एक लाख ७२ हजार चार सय ८६ जनाले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अहिलेसम्म प्रदेश नम्बर एकमा २३ हजार ८२, प्रदेश नम्बर २ मा २२ हजार सात सय ५६, वाग्मतीमा ५९ हजार नाै सय ४२ जनाले खोप लगाइएको छ।
शुक्रवारसम्म १ लाख ७१ भन्दा धेरैले लगाए काेराेना खाेप
सरकारले भारतबाट अनुदानमा आएको पहिलो चरणको खोप प्रयोगमा आएपछि मात्र दोस्रो चरणको अभियान सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। कोभिड खोप अभियानको पाँचौं दिनसम्म आइपुग्दा खोपको प्रभावकारिता कस्तो रह्यो ? कोरोना खोप भित्रिएपछिको नेपालको अवस्था कस्तो देखिदै छ ? छोटकरीले तयार पारेको यो सामग्री पढ्नुहोस्।
कोरोनाविरुद्धको पहिलो चरणको खोप १० दिनको अवधिमा ४ लाख ३० जनालाई लगाइने सरकारको दाबी थियो । तर, अभियानको नवौँ दिनसम्म आइपुग्दा १ लाख ५८ हजार ४ सय ८७ जनाले मात्रै खोप लगाएसँगइ खोप अभियान सुस्ताएको हो कि भन्ने चर्चा-परिचर्चा भइरहेको छ ।
दोस्रो चरणको खोप अभियानतर्फ अनिश्चितता देखिइरहेको बेला चीनले नेपाललाई ५ लाख डोज कोरोना खोप अनुदान दिने घोषणा गरेको छ। यसअघि माघ १८ मा चीनले ३ लाख कोरोना खोप दिने भनिएको थियो र काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले पनि त्यसको पुष्टि गरेको थियो ।
विदेशमन्त्री वाङले शुक्रबार घोषणा गरेको ५ लाख जोड कोरोना खोप यसअघि भनिएको ३ लाखभित्रै हो कि थप हो भन्ने खुलेको छैन ।
चीनले ५ लाख डोज कोरोना खोप अनुदान सहयोग गर्ने